Xogta Daahsoon ee Diyaaraddii Lagu Soo Riday Bardaale – Mareeg Online
Wasaarada amniga galmudug ayaa la wareegtay hub iyo maleeshiyo ku sugneed dagmada cadaado si loogu biiriyo daraawishta gamudug.
Al shabaab ayaa sheegtay in ay dileen xildhibaan katirsan baarlamnka hirshabelle.
Goobjoog News waxay baaris ku sameysay sababta keentay dhicitaanka diyaaradda, annago la hadalnay ehelada dadkii diyaaradda ku dhintay, shirkadii lahayd diyaaradda, xubno ka tirsan guddiga baadhista ee saddex geessoodka ah, wasaaradda duulista ee Soomaaliya iyo dad goobjoogayaal ah. Waxaa is weydin mudan, maxayse dowladda uga aamustay shilka? ma la helay sanduuqii madoobaa ee diyaaraddu oo laga heli karo xogta sidii ay diyaaradu u dhacday? sido kale yaa ka masuul ah shilka?.
Qormo: maxay tahay wadada kaliya ee itoobiya burbur uga badbaadi karto?
Dowlad Afrikan ah oo si adag uga hortimid Xildhibaano Aqoonsi u raadinayay Somaliland
Xiriir ay Goobjoog la sameysay qaar ka mid ah ehelka iyo qareennada marxuumiintii ku dhintay diyaaradda ayay dhammaan isku raaceen ineysan jirin cid ka socota dowladda Soomaaliya ama guddiga baarista oo la wadaagtay xog ku aaddan dhicista diyaaradda,iyo cidda riday.
Goobjoog oo xariir la sameysay masuuliyiin ka tirsan shirkadda African Express ayaa ogaatay ineysan jirin xog rasmi ah oo ay dowladda Soomaaliya la wadaagtay shirkadda, waxayna intaa ku dareen inay cabsi iyo walwal ka qabaan inay waayaan caymiska ay shirkaddu ku jirtay sabab la xadhiidha dowladda oo aan war rasmi ah ka soo-saarin sida diyaaraddu u dhacday iyo cidda leh masuuliyadda shilka dhacday. Mas’uul qariyay magaciisa oo ka tirsan African Express ayaa yiri “ waxaan wali dowladda ka la’nahay xitaa warqad noo qora aad ku caddeyneysaan in diyaarad lagu soo riday Bardaale, si aan u helno xaqa dadkii ku dhintay diyaaradda”. Sidoo kale waxuu sheegay ineysan jirin wax warbixin ah oo ay shirkaddu ka heshay guddiga baarista iyo wasaaradda.
Goobjoog news waxay sidoo kale xiriir la sameysay xubin ka tirsan guddiga baarista oo aan magaciisa qarinay sababo amni dartood ayaa noo sheegay in la kala diray guddigii baarista ee ka koobnaa dowladaha Kenya, Soomaaliya iyo Itoobiya taariikhdu markey aheyd May 24th 2020. Waxa uuna intaa noogu daray inay guddigu warbixin u gudbiyeen Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista hawada Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomaar.
Goobjoog oo xubinta guddiga hor dhigtay su’aal ah maxaa ka jira wararka sheegaya in guddiga baarista aysan helin sanduuqa madow ee diyaaradda ayaa ka meermeeray inuu si cad uga jawaabo waxa uuna ku gaabsaday inay guddigu gudbiyeen warbixin loona sheegay inaysan ka hadlin arrinkaas, isla su’aashaan ayaan weydiinay mas’uul sare oo ka tirsan Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada waxa uuna warkiisa ku soo koobay “waa la heli karaa waana la weyn karaa”.
Xog ay heshay Goobjoog ayaa muujineysa in ciidanka Itoobiya maamulayeen hawada inta u dhaxaysay Baydhaba iyo Bardaale.
Maxaa ka hor-taagan Dowladda Soomaaliya in ay soo gudbiso warbixinta dhabta ah ee diyaaradda lagu soo riday Bardaale?Yaa iska leh masuuliyadda dhicitaanka diyaaradda? Yaa lagu leeyahay magdhawga iyo qasaaraha maaliyadeed ee soo gaaray shirkadda African Express?Waa maxay Saameynta ay ku yeelaneyso duulimaadyada Soomaaliya soo dhicidda diyaaradda African Express?Ma run baa in aan la hayn sanduuqii madooba ee diyaaradda?
XOG: 3-Arrin oo halis ku ah Mooshinka Villa Somalia ka wado Cabdi Xaashi
Gudoomiyaha gobolka benadir ayaa shir gudoomiyay kulanka todobaadka caasimada.
Tuulax oo lacag badan Shirkadda Hormuud uga qaatay in degmadda Yaaqshiid la kala gooyo.
XOG: Villa Soomaaliya Oo Badaleysa Naqshada Muddo Kororsiga Lana Heshiineysa..
Beesha Wacaysle Horta Yaa U Maqan!!!
DAAWO SAWIRRADA:Wafdi uu Hogaaminayey Guddoomiye Ku-xigeenka 1aad ee Aqalka Sare oo Gaaray Hobyo.
Al-shabaab oo xukun Karbaash ah ka fulisay Gobolka Galgaduud